महरा रोशनीको घरमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा भेटियो ! – Life Nepali
महरा रोशनीको घरमा पुगेको सीसीटीभी फुटेजमा भेटियो !
काठमाडौं : निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद स*चिवालयकै कर्मचारी रोशनी शाहीको नि*वासमा एक घण्टा १९ मिनेट बिताएको खुलेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार प्रहरीले सं*कलन गरेको सी*सीटीभी फुटेजमा महरा निजी सु*रक्षाकर्मी नै लिएर त्यहाँ पुगेको देखिएको हो। उनी त्यहाँ पुगेको सूचनाको प्रा*विधिक वि*श्लेषण गरेर प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको थियो। कान्तिपुर दैनिकलाई प्राप्त जानकारीअनुसार साँझ ७ बजेर ६ मिनेटमा महराको गाडी शाहीको नि*वासछेउमा रो*किएको थियो। एक घण्टा १९ मिनेटपछि ८:२५ मा उनी त्यहाँबाट फर्किएका थिए।
त्यहाँबाट महरा सोझै सभामुख नि*वास बालुवाटार पुगेका थिए। प्रहरीले बालुवाटार क्षेत्रबाट पनि सी*सीटीभी फु*टेज सं*कलन गरेको थियो, जसमा महरा ८ बजेर ५३ मिनेटमा नि*वास प्रवेश गरेको देखिन्छ। प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली बुधबार साढे ९ बजेतिर शाहीको को*ठामै गएर घ*टनाबारे थ*प बुझेको थियो। त्यतिबेला पनि शाहीले आ*पसमा बा*झिने गरी घ*टनाबारे बताएकी थिइन्। प्रहरीले लिखित जा*हेरी दिन आ*ग्रह गर्दा उनले श्रीमान् आएपछि मात्रै आफूले नि*र्णय लिने बताएकी थिइन्।
अघिल्लो दिनसम्म आफूमाथि यौ*नहिंसा भएको बताउँदै प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर एक सयमा कल गरेकी र केही अनलाइन सञ्चारकर्मीसँग घ*टना सुनाएकी उनी ४८ घण्टाभित्रै ‘युटर्न’भइन्। शाहीले सोमबार आफैंले दिएको अ*न्तर्वार्ताभन्दा ठ्या*क्कै वि*परीत खालको अ*न्तर्वार्ता मंगलबार दिइन्। उनले मंगलबारको अ*न्तर्वार्तामा महरा आफ्नो घरमै नआएको दा*बी गरिन्। मंगलबार दिनभरजसो मोबाइल फोन अफ गरेर स*म्पर्क बाहिर रहेकी शाहीले अन्त*र्वार्ता दिएपछि मात्रै आफ्नो मोबाइल अन गरेकी थिइन्। उनले ब*यान फे*रेको विषयमा मंगलबार राति कान्तिपुरले उनीसँग जि*ज्ञासा राखेको थियो। जवाफमा उनले यो विषय ब*न्द भइसकेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यस्ता झि*नामसिना कुरातिर नजाम् के। आ–आफ्नो काम गर्नुस्।’
Previous सलुट छ उपप्रमुख बसन्तीलाई, जसले ३० लाखको गाडी सुविधा नलिई गाउँमा बि*रामी एम्बुलेन्स खरिद
Next रोशनीलाई ज्वालाको सुझाव: दिनमा पाँचपल्ट पि’साब फेरेजस्तो बोली नफेर्नु